(၁၆) နှစ်ကျော်လာတဲ့ သက်တမ်းမှာ ထူးချွန်ဆုတွေအများကြီးမရခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာကြောင့် ကျေနပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အိမ့်ချစ် – Cele Snap
စတူဒီယိုတေးသံရှင် ချစ်ကောင်းရဲ့ သမီးဖြစ်သူ အိမ့်ချစ်ကတော့ အဖေနဲ့အတူတူ သီချင်းတွေကို လိုက်ဆိုရင်း သူမကိုယ်တိုင် အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလမ်းမကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်က ဂီတသက်တမ်း (၁၆) နှစ်ကျော်မှာ ထူးချွန်ဆုတွေအများကြီးမရခဲ့ပေမယ့် ရိုးသားကြိုးစားမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာတွေတော့ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“တစ်ခါတစ်လေလဲလူ့ဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲကြိုစား အသိမှတ်ပြုမခံရတာတွေကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဟုတ်တယ်မလား…??? ဒါပေမယ့်အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဟာကိုသိနေဖို့နဲ့လိပ်ပြာလုံနေဖို့ သန့်ရှင်းနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးပါ။ အဲ့ဒီစိတ်ပဲထည့်ထားပြီးဂီတနဲ့ပတ်သတ်ရင်အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးပဲပေးခဲ့တာမို့ ပြန်ရခဲ့တာတွေကတော့ ပရိတ်သတ်ရဲ့မေတ္တာတွေပါပဲ။ ဂီတနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေသုံးပြီး အပေါ်ရောက်အောင်မတက်ခဲ့ဘူး။”
“လှေကားတစ်ထစ်ချင်းစီပဲ ဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်တက်လာခဲ့တာ အခုဆို ဂီတသက်တန်း၁၆ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ လျှောက်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းမှာ ဂီတထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီးမရခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်ရဲ့မေတ္တာတွေတော့ရခဲ့တယ်။ ပရိတ်သတ်မေတ္တာနဲ့ပဲ ဆက်လက်ရှင်သန်သွားမယ်။ အဲ့ဒီမေတ္တာတွေနဲ့ပဲ အမြဲရှင်သန်နေခွင့်ပေးပါနော် ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးရှင့်….. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အိမ့်ချစ်ကတော့ ပရိသတ်ကြီးသိပြီးသားအတိုင်းပဲ ဂီတကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးသားသား အလုပ်လုပ်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်တစ်ယောက် ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အနုပညာလမ်းမမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ မေတ္တာနဲ့တကွ ဂီတထူးချွန်ဆုတွေများစွာကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
စတူဒီယိုတေးသံရှငျ ခဈြကောငျးရဲ့ သမီးဖွဈသူ အိမျ့ခဈြကတော့ အဖနေဲ့အတူတူ သီခငျြးတှကေို လိုကျဆိုရငျး သူမကိုယျတိုငျ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါကို ရောကျရှိလာခဲ့သူတဈယောကျပါ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက အဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလမျးမကိုသာ တစိုကျမတျမတျလြှောကျလှမျးလာခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြက ဂီတသကျတမျး (၁၆) နှဈကြျောမှာ ထူးခြှနျဆုတှအေမြားကွီးမရခဲ့ပမေယျ့ ရိုးသားကွိုးစားမှုကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့မတ်ေတာတှတေော့ရရှိခဲ့တဲ့အကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“တဈခါတဈလလေဲလူ့ဘဝမှာဘယျလောကျပဲကွိုစား အသိမှတျပွုမခံရတာတှကွေုံဖူးကွမှာပါ။ ဟုတျတယျမလား…??? ဒါပမေယျ့အဓိကကတော့ ကိုယျ့ကွိုးစားမှုတိုငျးဟာ ကိုယျ့ဟာကိုသိနဖေို့နဲ့လိပျပွာလုံနဖေို့ သနျ့ရှငျးနဖေို့ပဲ လိုပါတယျ။ ဒါဟာအရေးအကွီးဆုံးပါ။ အဲ့ဒီစိတျပဲထညျ့ထားပွီးဂီတနဲ့ပတျသတျရငျအရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အမှနျကနျဆုံးပဲပေးခဲ့တာမို့ ပွနျရခဲ့တာတှကေတော့ ပရိတျသတျရဲ့မတ်ေတာတှပေါပဲ။ ဂီတနဲ့ပတျသတျပွီး မမှနျကနျတဲ့နညျးတှသေုံးပွီး အပျေါရောကျအောငျမတကျခဲ့ဘူး။”
“လှကေားတဈထဈခငျြးစီပဲ ဖွေးဖွေးနဲ့မှနျမှနျတကျလာခဲ့တာ အခုဆို ဂီတသကျတနျး၁၆ နှဈကြျောခဲ့ပွီ။ လြှောကျခဲ့တဲ့သကျတမျးမှာ ဂီတထူးခြှနျဆုတှေ အမြားကွီးမရခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပရိတျသတျရဲ့မတ်ေတာတှတေော့ရခဲ့တယျ။ ပရိတျသတျမတ်ေတာနဲ့ပဲ ဆကျလကျရှငျသနျသှားမယျ။ အဲ့ဒီမတ်ေတာတှနေဲ့ပဲ အမွဲရှငျသနျနခှေငျ့ပေးပါနျော ခဈြရတဲ့ပရိတျသတျကွီးရှငျ့….. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼” ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့ပါတယျ။အိမျ့ခဈြကတော့ ပရိသတျကွီးသိပွီးသားအတိုငျးပဲ ဂီတကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့စိတျနဲ့ပဲ ကွိုးစားနသေူဖွဈပွီး ရိုးရိုးသားသား အလုပျလုပျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အိမျ့ခဈြတဈယောကျ ရှဆေ့ကျလြှောကျမယျ့ အနုပညာလမျးမမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ မတ်ေတာနဲ့တကှ ဂီတထူးခြှနျဆုတှမြေားစှာကိုလညျး ဆှတျခူးနိုငျပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။